Allgedo.com » Qaxootiga Soomaalida ah ee degan Xeryaha Dhadhaab oo ka Cabanaya Amni daro iyo Nololxumo.
Qaxootiga Soomaalida ah ee degan Xeryaha Dhadhaab oo ka Cabanaya Amni daro iyo Nololxumo.
Xaalado isbiirsaday oo isugu jira nolol xumo iyo Amnidaro ayaa laga soo sheegaya inay ku sii kordhayaan xeryaha qaxootiga Soomaaliyeed ay ku jiraan ee Dhadhaab.
Qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay shaaciyeen in nolol xumo iyo amaandari isbiirsaday ay ku sii baahayaan xeryaha ay ku nool yihiin, iyagoo tibaaxay in arintaasi ay ku qasabtay bilaabitaanka dib ugu soo noqoshada dalkooda hooyo oo wax u dhaamo lahayn.
Bishaar Mohamed oo ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee danta biday inuu ku noolaado xeryaha dhadhaab, gaar ahaan xerada dhagaxley ayaa shaaca ka qaaday mar uu la hadlay the Guardian in iminka ay xaaladooda ay tahay mid Allow sahal ah una baahan wax ka qabasho, isagoo hoosta ka xariiqay inuu yaraaday gargaarkii ay heli jireen islamarkaana taasi ay u sii dheertahay xaalad amaandari.
Waxuu sheegay inuu yahay Aabe dhalay 6-carruur ah oo hadana ay u dheertahay xanuun,waxuuna intaasi raaciyay hadalkiisa inuusan haaysan wax uu ku maareeyo nolol maalmeedkiisa oo ay yihiin dad wax ka sugaya hey’ado gar gaar oo halkaasi ka shaqeeye kuwiina ay gaabiyeen.
dhanka kale muwaadinkaan soomaaliyeed.ayaa ka hadlay in sidoo kale marka laga soo tago xaalada nolol xumo iney u wehliyaan dhibaatooyinka dhanka amaandarida ah oo ku haaysato xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, isagoo carababaay inay jiraan kooxo dhibaato u geysta dadka qaxootiga oo awalba iyagaba ahaa kuwo la tacaala nolosha adag ee ku haaysato dalka Kenya.
“ku sii noolaashaha Xeryaha qaxootiga waa arin qatar badan oo maalinba maalinta ka danbeysa ka sii dareysa, waxaa jirtay nabad ka hor intaysan imaan amnidaradaan, balse iminka waxaa laga dareemaya amaandari baahsan”, sidaasi waxaa sheegay Mahamed oo tan iyo 1992-dii ku nool dallkaasi kenya.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya, gaar ahaan xeryaha qaxootiga ayaa iminka waxuu yahay hadafkooda ugu danbeeya ayaa ah mar yaa idin celiya wadankiinii hooyo oo aysan jirin wax kuu dhaama.